Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo sheegay in shirka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu hal maalin dib u dhacay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo sheegay in shirka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu hal maalin dib u dhacay
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya kaasoo la qorsheeyay in 28-ka October uu ka dhaco Muqdisho ayaa dib u dhacay, sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid Juxa.
Juxa ayaa sheegay in maanta oo Sabti ah ay soo gaari doonaan Muqdisho dhammaan madaxda maamul goboleedyada, waxaana la filayaa in shirku beri oo Axad ah uu si rasmi ah u furmo.
Qaar katirsan hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa tagay Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa la filayaa ilaa galabta in uu gaaro Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa asbuucii lasoo dhaafay iclaamiyay shirkan.
October 12, 2017 Iran oo cambaareysay badmaax dalkeeda u dhashay oo ay dileen ciidanka badda Puntland